उच्च गुणवत्ताको फ्लोर जैक jokly helsale - zhejiag yyiung मेसिनरी कम्पनी, LTD
EPINT उच्च गुणवत्ताको भुईल jt hellesle - Zhejiag Yyiung मेसिनरी CO. LTD, कोरिया, कोरिया, क्यानाडा, क्यानाडा, क्यानाडा र आदि ट्रेन, अटोमोबाइल, फोर्लिफ्ट र निर्माण मेसिनरमा विशेषज्ञताका ग्राहकहरु समावेश गर्नुहोस् जसले चीनमा उनीहरूको प्रमुख कास्टिंग आपूर्तिकर्ताहरु मध्ये 10 भन्दा बढी कम्पनीको रूपमा सहयोग गरेका छन्।
को डिजाइन मा ध्यान दिएर एपन्ट विज्ञापन को लागी राम्रो छ।
1. हामीले जाँच गरेपछि कसरी म प्रतिक्रियाहरू पाउन सक्छु?
हामी तपाईंलाई कार्य दिन 12 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं।
2. हामीलाई सामान दिनुहुन्छ?
सामान्यतया हामी तपाईंको सामानहरू समुद्रमा पठाउँदछौं, किनकि हामी जियानिंग शहरमा छौं, र शंघाई हाम्रा कुनै पनि अन्य देशहरूमा सामानहरू लगाउन धेरै सुविधाजनक र दक्ष हुन्छौं।
Your। तपाईको प्रत्यक्ष निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी?
हामीसँग दुई हाम्रो आफ्नै कास्टिंग परिवेश र एक सीएनजी माकीइनिंग कारखाना छ, हामीसँग हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री विभाग पनि छ। हामी उत्पादन र आफैंले बेच्छौं।
1. हाम्रो उत्पादनहरू मुख्यतया 300 भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात गरिन्छ, जर्मनी, जापान, कोरिया, कोरिया, कोरिया, कारबाही, फोर्कलिफ्ट र निर्माण मेसिनरीमा विशेषज्ञता समावेश गर्दछ। , हामी पहिले नै विश्वका 10 € ™ comples कम्पनीहरूको 10 भन्दा बढी कम्पनीहरूको साथ चीनमा उनीहरूको प्रमुख कास्टिंग आपूर्तिकर्ताको रूपमा सहयोग गर्दै थियौं।
2. हामीसँग4उत्पादन लाइनहरू र2तातो उपचार उत्पादन लाइनहरू छन्, एक दिन बोतल ज्याक एक दिन हामी लगभग 5000000pc को उत्पादन गर्न सक्दछौं, हामी 50000PC को बारेमा उत्पादन गर्न सक्छौं।
The... कम्पनीले 1,000000 वर्ग मीटरको क्षेत्रलाई समेट्छ, कम्पनीले "उद्योगको लागि राम्रो प्रतिष्ठा प्रदान गर्न, उद्यमी स्केल बढ्दै गइरहेको छ। YICENG ले तपाईको सामूहिक संग विश्वास, त्यहाँ राम्रो भोलि, याइगरलाई विश्वास गर्दछ, येस् ung ्ग वा येस् ung छनौट गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई उत्तम सेवा र ग्यारेन्टी दिनेछौं।
The। कम्पनीले सीएनपू लालू, मिलिंग मेशिन, स्थिर लोड परीक्षण, रक्वावा रोबोट टेस्टिंग र परीक्षण प्रशोधन र परीक्षण गर्दै कम्पनीको लागि कुञ्जी भागहरूको प्वालहरू - ज्याक सिलिन्डर विशेष रूपमा स्थितिको प्वालको शुद्धता सुनिश्चित गर्नको लागि लेजर ड्रिलिंग मेशिनमा, ताकि उत्पाद गुणवत्ता एक गुणा गुण भएको छ।
EPIT को बारेमा
Zheziag yyiung मेशिनरी CO., LTD.was 200 in मा स्थापित भयो। जुन यांग्त्ज नदी डेल्टा आर्थिक बेल्ट शहर, जान्निंगमा अवस्थित छ, जहाँ शंघाई, ह्यांगजो, निन्जो, सुज्जाुअल, आदि नजिकको छ। कम्पनी बिभिन्न इन्जिन क्रेन, भुइँमा jack 3t, फ्लोर प्रसारण ज्याक हो जुन अनुसन्धान, उत्पादन र बिक्रीको लागि एक निकायको विशेष उद्यम हो। कम्पनीले 1,000000 वर्ग मीटरको क्षेत्र समेट्छ, कम्पनीले "प्रतिष्ठाको प्राथमिकता" उत्पादन, उद्योगको राम्रो प्रतिष्ठा प्रदान गर्न, उद्यम पैमाने बढ्दो छ। YICENG ले तपाईको सामूहिक संग विश्वास, त्यहाँ राम्रो भोलि, याइगरलाई विश्वास गर्दछ, येस् ung ्ग वा येस् ung छनौट गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई उत्तम सेवा र ग्यारेन्टी दिनेछौं। EPONT मेकानिकल विभिन्न ईन्जिन क्रेन, भुइँमा jach jack 3t, फ्लोर प्रसारण jack हो जुन शव प्रोटेक्टमेन्ट, उत्पादन र बिक्रीको लागि एक निकाय गरिएको उद्यम हो। हामीसँग योग्यताहरू छन्: हामीसँग औपचारिक योग्यता प्रमाणपत्र2छ। निर्माण टेक्नोलोजी: निरन्तर अनुसन्धान र नवीनता। ग्राहक सन्तुष्टि: सन्तोषजनक उत्पादन प्रदान गर्नुहोस्।